खुलामञ्च अतिक्रमण : मासेर जनताको जमिन, उम्कन्छौ अब कति दिन ? « Nepal Bahas
खुलामञ्च अतिक्रमण : मासेर जनताको जमिन, उम्कन्छौ अब कति दिन ?
‘खुलामञ्च !कहाँ छ ?’
प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७६, बिहीबार १३:०६
काठमाडौं । खुलामञ्च अतिक्रमण गरिएपछि स्थानीय सर्वसाधारण र सम्पदा संरक्षणका अभियान्ता यतिबेला आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलित बनेका उनीहरुले आज खुलामञ्चमा नै उपस्थित भएर खुलामञ्च मास्न खोज्ने काठमाडौं महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
आन्दोलित बनेका उनीहरुले प्रदर्शन संगै उनीहरुले ‘खुला मञ्चलाई खुला राखौं’ अभियान सुरु गरेका छन् । प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानदेखि नयाँ शक्तिकी नेतृ मानुषी यमी भट्टराईसमेत सहभागी भएकी थिइन् ।
ठेकेदार कम्पनीले खुलामञ्चमा अहिले ४० वटा नयाँ ब्यापारिक सटर हालेको छ । जसका कारण खुलामञ्च अतिक्रमणको शिकार हुन पुगेको छ । नियम, मापदण्ड र सहमति विपरित ठेकेदारले खुलामञ्चमा सटर हाल्दा पनि काठमाडौंमा महानगरपालिका मुकदर्शक बनेको छ ।
नेपालमा अझै केही दिन मौसम बदली रहने
अग्रवाल परिवार फरार प्रकरणः शहरमा मिटरव्याजीको जगजगी